जहाँ कै’दीबन्दीले नै सञ्चालन गरेका छन् ब्यूटीपार्लर ! – Khabarhouse
जहाँ कै’दीबन्दीले नै सञ्चालन गरेका छन् ब्यूटीपार्लर !
Khabar house | १६ पुष २०७६, बुधबार १६:२१ | Comments
एजेन्सी– अप’राधमा क’सुरदार मानिएका व्यक्ति अर्थात कै’दीबन्दी जो जे’ल भित्र स’जाय भुक्तान गर्दछन् । उनीहरु विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य समयमा जे’लबाट बाहिरिन पाउँदैनन। यतिमात्र होइन, बाहिरका आम मानिसको सम्पर्क मा समेत आउन पाउँदैनन् । तर भारतको एक जेलका कै’दीबन्दी भने आम जनतासंग प्रत्यक्ष भेटी उनीहरुको सौन्दर्य बढाउने काममा सक्रिय रहेका छन् ।
भारतको केरलामा जे’लभित्र रहेका कैदीबन्दीले सामाजिक दायित्वका लागी भन्दै अनौठो कार्यको शुरुवात गरेका छन। विभिन्न अप’राधमा कसुरदार मानिएका कै’दीबन्दीले जे’ल भित्र सजाय भुक्तान मात्र गरेका छैनन् उनिहरुले एक व्यूटीपार्लर सञ्चालन गरेका छन् । न्यू इन्डियन एक्सप्रेसका प्रकाशित समाचारका अनुसार उक्त व्यूटी पार्लरमा कपाल का’ट्ने, रंगाउने, स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर र फे’सियल लगायतका सबै सुविधा उपलब्ध छ ।
जेलका २२ कै’दीबन्दीलाई का’रागार व्यवस्थापनले व्युटिसियन तालिम दिई काममा लगाएको थियो । जसका लागि जे’ल व्यवस्थापनले एक खाली भवनलाई प्रयोगमा ल्याई ९ लाख भारुमा पार्लर निर्माण गरेको थियो । कै’दीद्वारा सञ्चालित ब्यूटी पार्लरमा अन्य ब्यूटी पार्लरको तुलनामा निकै कम मुल्यमा सेवा दिइएको छ । उक्त ब्यूटीपार्लरमा ब्यूटीशियनका रुपमा कै’दिबन्दी नै रहने गरेका छन् ।
उक्त ब्युटि पार्लरमा वरिष्ठ नागरिकका लागी मैनिक्योर र फुट मसाजको सेवा अन्य सेवाको उपयोगमा निशुल्क दिने गरीएको छ । पार्लरमा हुने आम्दानि स्थानिय एक वेलफेयर फण्डमा जम्मा हुने गरेको छ । पार्लरले सफलता पाएपछि अब तिरुअनंतपुरम्, त्रिशूर, कुन्नूर र कोझिकोडीमा कैदीबन्दीले पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा रहेको जेलका महानिर्देशक ऋषिराज सिंहले बताएका छन् ।